Fihaonamben'ny mpiasa amin'ny fikaonan'ny mpiasa amin'ny taona 2019 | Hongli
2020/6/15, ny orinasantsika dia nanao ny Kaonferansa Commendation Commendance de l'Ecritement tamin'ny taona 2019. Nandritra ny fihaonambe dia voalohany Andriamatoa Mr.Xie namintina ny zava-bita tamin'ny taon-dasa. Ny haavon'ny varotra milina slitting dia nitombo ary ny teknika ny fantsom-pamokarana escalator dia mahay kokoa. Tamin'ny taon-dasa, ny orinasantsika dia nanao fampiroboroboana mahomby ary amin'ity taona ity dia miatrika fanamby isika. Nandritra ny antsasaky ny taona voalohany, ny orinasantsika dia nanao ny fandaharam-pivoriana vita amin'ny lamba vita amin'ny Melt-blown ary nahazo ny zava-bita tsara indrindra. Saingy mbola mila mahatsapa ny tsy fikaonan'ny programa ary avy eo dia mampiroborobo.
Mandritra izany fotoana izany, mpiandraikitra atrikasa telo no samy manao ny lahateniny momba ny drafitry ny atrikasa isaky ny atrikasa.
Avy eo, dia midera ireo mpiasa miavaka tamin'ny taon-dasa ny lehibenay. Samy nahazo ny mari-pankasitrahana omen'ny tsirairay. Ity taratasy fanamarinana ity dia maneho ny ezaka nataony tamin'ny taon-dasa ihany koa.
Eny, ny tetikasa lehibe indrindra mandritra ity fihaonambe ity dia ny fananganana ivon-toerana ara-teknika. Midika izany fa ny teknolojia ny orinasa dia nanao fampiroboroboana be tokoa. Noho ny fanampian'ny foibe ara-teknika, dia mitombo ny fahafahan'ny orinasa miasa amin'ny fanavaozana tsy miankina. Ary ny famokarana dia hihamatanjaka sy mora kokoa.
Farany, midera ny mpiasan'ny mavesatra amin'ny programa milina vita amin'ny lamba Melt-blown. Nanao ezaka miavaka ny mpiasam-panjakana nandritra ity fandaharana ity. Ohatra, rehefa nivarotra milina iray isika dia ny tompon'andraikitra ivotoerana teknika sy mpiasa maromaro hafa dia handeha amin'ny orinasan'ny mpividy hanampy amin'ny fametrahana na aiza na aiza. Miaraka amin'ny ezak'izy ireo dia aleon'ny mpividy ny milina.